CASE တည်ဆောက်ရေး စက်ယန္တရား (MM) ၀ယ်ယူသူအပေါ် အလေးထားမှု
CASE takes customers seriously – so seriously, in fact, that we invite equipment users to participate in defining and improving new products. We call this our Customer-Driven Product Definition (CDPD) process. We "ဤကဲ့သို့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို CDPD " Customer အခြေပြု ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်မှု"" ဟုခေါ်သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် CASE နှင့် CASE ၏ ယှဉ်ပြိုင်ဖက် ၀ယ်ယူသူများသည် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များ စက် model အသစ်၏ စမ်းသပ်ချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်များတွင် အတူတကွပါဝင်လာရန် ကူညီပေးထားသည်။
CDPD ဖြစ်စဉ်တွင် အောက်ပါအချက်များပါဝင်သည်။
၀ယ်ယူသူများအတွက် လေ့လာရေးခရီးစဉ်နှင့် စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်းများ
မည်သို့သော ၀ယ်ယူသူများသည် မည်သည့်စက်မော်ဒယ်အသစ်ပုံစံများ အသုံးပြု၍ ယင်းတို့၏ အသုံးဝင်မှုအပေါ် တင်ပြချက်အား စစ်ဆေးခြင်း
၀ယ်ယူသူတို့၏ တုံ့ပြန်ချက်တို့ကို အပြီးသတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးခြင်း
ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် စက်ယန္တရားတည်ဆောက်ရေးတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်း များပေးနိုင်ရုံမျှသာမက စက်မောင်းလုပ်သားတို့၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုကို ရရှိစေပါသည်။ Backhoe Loader, Skid Loader နှင့် Compact Track Loader စသော ယန္တရားများအတွက် CDPD လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
၀ယ်ယူသူတို့၏ အကြံဥာဏ်များကလည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများ၊ သဘောထားအမြင်များ၊ ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ ဆောင်ခြင်းမှအစ စက်သံဆူညံမှုလျော့ကျစေရေး၊ အေးသော ရာသီဥတုတွင် စက်နှိုးခြင်းစသည်တို့တွင်ပါ တိုးတက်မှုရရှိစေနိုင်သည်။
CASE ၀ယ်ယူအားပေးသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် Canada မှ Dennis Zentner သည် "N" စီးရီး CPDP လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ထုတ်လုပ်သူတွေကသာ စက်ကိုထုတ်လုပ်ကြပါသည်။ ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးအပြင်ကို ချပြထားတာကို သင်ကောဘယ်လိုထင်ပါသလဲ၊ ဒီဇိုင်းပုံဖော်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ခွင့်ရခြင်း ကလည်းပထမတန်းခံစားမှုပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့က အပြောင်းအလဲတွေအတွက် အကြံဥာဏ်တွေ ပေးတယ်၊ CASE က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
အမေရိကန် Coon Rapids မှ စက်ဝယ်ယူသူ Jordan Hess သည်လည်း 'N' စီးရီး loader/backhoe အတွက် CDPD လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ယင်းအစီအစဉ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ယန္တရားအင်ဂျင်နီယာများကို ခန်းလုံးပြည့်ထိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သိလိုသည်နှင့် ထင်မြင်ချက်များကို သေချာဆွေးနွေးရသလိုပါပဲ။ သူတို့က ကောင်းနေပြီးသား အရာတွေကို မသိချင်ပဲနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေပြောင်းလဲချင်သလဲဆိုတာကိုသာ သိချင်ကြတာပါ။